ပါတီမိတျဆကျကဏ်ဍ (ဒီမိုကရစေီပါတီသဈ(ကခငျြ) – Voice of Myanmar
၂၀၂၀ပါတီစုံအထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ဒီမိုကရစေီပါတီသဈ(ကခငျြ)ပါတီရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးတိနျ့ဆောငျကို VOM သတငျးထောကျ ကိုရှိုငျးအောငျက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားတာဖွဈပါတယျ။
VOM- ဒီမိုကရစေီပါတီသဈ(ကခငျြ)ပါတီအနနေဲ့ လာမယျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျးအရအေတှကျဘယျလောကျဝငျပွိုငျဖို့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို စာရငျးပေးထားလဲ?
ဦးတိနျ့ဆောငျ- ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ၄ ဦး၊ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး၂ ဦး၊ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ၂ ဦး စုစုပေါငျး ၈ ဦးပါ ခငျဗြ။
VOM – ပါတီဝငျအငျအား အရအေတှကျဘယျလောကျရှိလဲ။
ဦးတိနျ့ဆောငျ – ပါတီဝငျအငျအား ၈၀၀၀ ကြျောရှိပါတယျ။
VOM-လကျရှိအာဏာရပါတီနဲ့ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီနဲ့ တခွားအငျအားကွီးပါတီတှကေို ဘယျလိုအငျအားနဲ့ယှဉျပွိုငျမှာလဲ၊ ဘယျလိုရညျရှယျခကျြနဲ့ ပါတီထောငျပွီးရှေးကောကျ ပှဲဝငျပွိုငျဖွဈတာလဲ။
ဦးတိနျ့ဆောငျ- ပါတီကွီးတှကေတော့ တဈနိုငျငံလုံးအတှကျရညျရှယျပွီး အစိုးရဖှဲ့နိုငျတဲ့အနအေထားနဲ့ လှုပျရှားပေါ့၊ ကနြျောတို့ကတြော့ ဒသေတှငျးကိုပဲ ရညျရှယျထားတာပေါ့၊ ဒသေဆိုတဲ့နရောတောငျ ကတြျောတို့က ၁၉၉၀ ခုနှဈက ဗကပ မွနျမာပွညျကှနျမွူနဈပါတီ ၁၀၁ စဈဒသေ လိုငျဇာမှာဖွဈတဲ့ ဝိုငျးမျောမွို့နယျ၊ ဆော့လျောမွို့နယျ၊ ခြီဖှမွေို့နယျ အဲ့ဒီမွို့နယျသုံးခုဟာ ၁၉၉၀ ခုနှဈမှာ အဲ့အခြိနျတုနျးက စဈအစိုးရနဲ့ နဝတ ငွိမျးခမျြးရေးလကျမှတျထိုးတာပေါ့နျော၊ အဲ့ဒီကခငျြအထူးဒသေ(၁)လို့ သတျမှတျထားတဲ့ မွို့နယျ ၃ ခုကို အထိကရညျရှယျခကျြထားပွီး ကြှနျတျောတို့က အဲ့ဒီဒသေရဲ့အကြိုး၊ အဲ့ဒီဒသေ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျဖို့အတှကျ အဲ့ဒီဒသေမှာရှိတဲ့ တိုငျးရငျးသားဒသေခံတှကေို နိုငျငံရေးအရ ဦးစီးဦးဆောငျဖို့ အဲ့ဒီရညျရှယျခကျြတှနေဲ့ပွိုငျကွတာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ပါတီက ၂၀၁၉ ခုနှဈ သွဂုတျလ ၂၉ ရကျနမှေ့ာ စတငျထူထောငျတာပါ။
VOM- ပါတီရဲ့ဆောငျပုဒျနဲ့ ကတိကဝတျက ဘာတှလေဲ။
ဦးတိနျ့ဆောငျ- (၁)ငွိမျးခမျြးရေး၊ (၂) တနျးတူညီမြှရေး၊ (၃) စညျးလုံးညီညှတျရေး ၊ (၄) ဖှငျ့ဖွိုးတိုးတကျရေး အဲ့ဒါတော့ပါတီဆောငျပုဒျပေါ့။
VOM -ပါတီရဲ့ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို ဘယျလိုအရညျအခငျြးတှေ သကျမှတျပွီးရှေးခယျြတာလဲ။
ဦးတိနျ့ဆောငျ- အဓိကကတော့ ဒသေခံတှလေညျးဖွဈမယျ၊ ကြှနျတျောတို့ပါတီရညျရှယျခကျြနဲ့လညျးကိုကျညီတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေိုရှေးခယျြထားတာဖွဈပါတယျ။
VOM-ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမယျ့ မွို့နယျ ၄ ခုမှာ မဲပေးခှငျ့ရှိတဲ့ မဲဆန်ဒရှငျ အရအေတှကျဘယျလောကျရှိလဲ။
ဦးတိနျ့ဆောငျ- မဲထညျ့နိုငျတဲ့သူဦးရေ ပထမဦးဆုံးအကွိမျထုတျပွနျထားတာက ဝိုငျးမျောမွို့နယျမှာ ၈ သောငျးကြျောရှိတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဒုတိယအကွိမျကတော့ ပွနျတိုးလာတယျ၊ ခြီဖှမွေို့နယျမှာ ၁ သောငျးကြျောရှိတယျ၊ ဆော့လျောမွို့နယျမှာ ၅ ထောငျကြျောတယျ၊ အငျဂနျြးယနျမွို့နယျမှာ ပထမဆုံးအကွိမျထုတျပွနျထားတာ ၉၅၀ ကြျောရှိတယျ။
၂၀၂၀ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(ကချင်)ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတိန့်ဆောင်ကို VOM သတင်းထောက် ကိုရှိုင်းအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
VOM- ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(ကချင်)ပါတီအနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက်ဘယ်လောက်ဝင်ပြိုင်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို စာရင်းပေးထားလဲ?
ဦးတိန့်ဆောင်- ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄ ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၂ ဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦး စုစုပေါင်း ၈ ဦးပါ ခင်ဗျ။
VOM – ပါတီဝင်အင်အား အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
ဦးတိန့်ဆောင် – ပါတီဝင်အင်အား ၈၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
VOM-လက်ရှိအာဏာရပါတီနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ တခြားအင်အားကြီးပါတီတွေကို ဘယ်လိုအင်အားနဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှာလဲ၊ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပါတီထောင်ပြီးရွေးကောက် ပွဲဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာလဲ။
ဦးတိန့်ဆောင်- ပါတီကြီးတွေကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့ လှုပ်ရှားပေါ့၊ ကျနော်တို့ကျတော့ ဒေသတွင်းကိုပဲ ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့၊ ဒေသဆိုတဲ့နေရာတောင် ကျတော်တို့က ၁၉၉၀ ခုနှစ်က ဗကပ မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ၁၀၁ စစ်ဒေသ လိုင်ဇာမှာဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ်၊ ချီဖွေမြို့နယ် အဲ့ဒီမြို့နယ်သုံးခုဟာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ အဲ့အချိန်တုန်းက စစ်အစိုးရနဲ့ နဝတ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးတာပေါ့နော်၊ အဲ့ဒီကချင်အထူးဒေသ(၁)လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့နယ် ၃ ခုကို အထိကရည်ရွယ်ချက်ထားပြီး ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒီဒေသရဲ့အကျိုး၊ အဲ့ဒီဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသခံတွေကို နိုင်ငံရေးအရ ဦးစီးဦးဆောင်ဖို့ အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပါတီက ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ စတင်ထူထောင်တာပါ။
VOM- ပါတီရဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ကတိကဝတ်က ဘာတွေလဲ။
ဦးတိန့်ဆောင်- (၁)ငြိမ်းချမ်းရေး၊ (၂) တန်းတူညီမျှရေး၊ (၃) စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ၊ (၄) ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဲ့ဒါတော့ပါတီဆောင်ပုဒ်ပေါ့။
VOM -ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ သက်မှတ်ပြီးရွေးချယ်တာလဲ။
ဦးတိန့်ဆောင်- အဓိကကတော့ ဒေသခံတွေလည်းဖြစ်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့ပါတီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
VOM-ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် မြို့နယ် ၄ ခုမှာ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။
ဦးတိန့်ဆောင်- မဲထည့်နိုင်တဲ့သူဦးရေ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်ထားတာက ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာ ၈ သောင်းကျော်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ ပြန်တိုးလာတယ်၊ ချီဖွေမြို့နယ်မှာ ၁ သောင်းကျော်ရှိတယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ်မှာ ၅ ထောင်ကျော်တယ်၊ အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်ထားတာ ၉၅၀ ကျော်ရှိတယ်။